अब घरमा नै बोलाएर पिसिआर गर्दा शुल्कमा अतिरिक्त रु. ५०० लाग्ने - Chandragiri News
Home समाज अब घरमा नै बोलाएर पिसिआर गर्दा शुल्कमा अतिरिक्त रु. ५०० लाग्ने
अब घरमा नै बोलाएर पिसिआर गर्दा शुल्कमा अतिरिक्त रु. ५०० लाग्ने
२०७८, ६ जेष्ठ बिहीबार १३:२०
काठमाडौँ, जेठ ६ गते । अब बिरामी वा व्यक्तिलाई कोभिड–१९ को पिसिआर परीक्षण गराउनका लागि अस्पताल वा प्रयोगशाला धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले घरमा आएर स्वास्थ्यकर्मीले पिसिआर परीक्षणको स्वाब सङ्कलन गर्ने मापदण्ड जारी गरेपछि अस्पताल वा प्रयोगशाला जानुपर्ने बाध्यता हटेको हो ।
जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले घरमै पिसिआर गर्न ‘घरमै पिसिआर परीक्षणका लागि नमूना सङ्कलन गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७८’ ल्याएको छ । कोही बिरामी वा कसैलाई इच्छा लागेमा स्वास्थ्यकर्मीलाई घरमै बोलाएर पिसिआर परीक्षणका लागि स्वाब दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि पिसिआर परीक्षणका लागि प्रयोशगाला वा अस्पताल जानुपर्ने थियो ।
जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजेश गुप्ताले मापदण्ड लागू गरेपछि अब कोही पनि व्यक्तिले पिसिआर परीक्षणका लागि घरमा नै स्वास्थ्यकर्मी बोलाउन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले बिरामी भएको वा सङ्क्रमण लक्षण देखिएका व्यक्तिलाई प्रयोगशालाबाट खट्ने स्वास्थ्यकर्मीले घरमै आएर पिसिआरका लागि नमुना सङ्कलन गर्ने जनाउनुभयो । उहाँले यसरी घरमा नै बोलाएर पिसिआर गर्दा तोकिएको शुल्कमा अतिरिक्त रु. ५०० लाग्ने बताउनुभयो ।
अहिले सरकारी प्रयोगशालामा कन्ट्याक्ट टे«सिङमा परेकालाई निःशुल्क र आफूखुशी पिसिआर गराउनेलाई रु. एक हजार तथा निजी प्रयोगशालाले रु दुई हजार लिने गरेका छन् । मापदण्डमा बिरामीले इच्छाएको अवस्थामा कोभिड–१९ पिसिआर परीक्षणका लागि दर्ता भएका प्रयोगशालाबाट खटिएका स्वास्थ्यकर्मीबाट बिरामीको घरबाटै पिसिआर परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
घरमा गएर स्वाब सङ्कलन गराउने सेवाग्राहीको विवरणसँगै स्वास्थ्यकर्मीको नाम, पद, काउन्सिल नम्बर, नमूना सङ्कलन भएको स्थान र समय खुल्ने गरी विवरण फारममा भर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले देशभरि सरकारी र निजी गरी ९० प्रयोगशालाले पिसिआर परीक्षण गर्ने अनुमति पाएका छन् । ती प्रयोशगालाले अहिले दैनिक करिब २० हजार पिसिआर परीक्षण गर्ने गरेका छन् ।
थप जानकारीका लागि +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३, +९७७-४२६२६९६
Previous articleरातो मत्स्येन्द्रनाथ बुधबार बुङ्गमती फिर्ता लगियाे
Next articleच.न.पा नं १ दहचोक स्थित श्रीकृष्ण माबि प्राङ्गण(वडा कार्यालय मुनि)मा एन्टिजिन परिक्षण हुने
घुस अस्विकार गर्ने २४ ट्राफिक प्रहरी सम्मानित
सतुंगलको साल्ट ट्रेडिङमा सहुलियत पसल सञ्चालन, कुन सामानमा कति छुट ?
नेपाली कांग्रेसले असोज ५ गते काठमाडौंमा वडा अधिवेशन गर्ने